Lingvist: ဘာသာစကားတစ်ခုကိုသင်ယူ - အစာရှောင်ခြင်း | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပညာရေး Apps ကပ » Lingvist: ဘာသာစကားတစ်ခုကိုသင်ယူ - အစာရှောင်ခြင်း
Lingvist: ဘာသာစကားတစ်ခုကိုသင်ယူ - အစာရှောင်ခြင်း APK ကို
Lingvist ကမ္ဘာ့အများဆုံးဆန်းသစ်ဘာသာစကားသင်ယူမှု App ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာသင်အကောင်းဆုံးလေ့လာသင်ယူမည်သို့ adapts ထို့နောက်သင့်အကြောင်းသိလာကြတယ်။ ယနေ့ပြုလုပ်ကြိုးစားပါနှင့်ပြင်သစ်, စပိန်, ဂျာမန်, ရုရှား, Estonian အဘိဓါန်များနှင့်အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူ - အစာရှောင်ခြင်း။
- အစစ်အမှန်အချိန်၌သင်တို့၏အဆင့်အထိ adapts
- အရှိဆုံးသက်ဆိုင်ရာနှင့်လက်တွေ့ဝေါဟာရလေ့လာပါ (4,000 + စကားလုံးများကို)
- Native-အသံကို virtual အသံဖြင့်
-6ဘာသာစကားများထံမှရရှိနိုင်အင်္ဂလိပ်သင်တန်းများ
- ဠာ - မှောင်မိုက် mode ကို!
ကျွန်ုပ်တို့၏ 40 + ဘာသာဗေဒ, သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့် developer များကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင်ဘာသာစကားသင်တန်းများနှင့်အတူသင်ယူစက်များတွင်နောက်ဆုံးပေါ်သုတေသနပေါင်းစပ်ကြပါပြီ - အားလုံးတစ်ဦးချောမွေ့အလိုလိုသိနှင့်စွဲလမ်း app ထဲမှာ။ သင့်ရဲ့ဝေါဟာရတိုးတက်ကြီးပွားခြင်းနှင့် Lingvist ရဲ့ဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းနည်းပညာနှင့်အတူပိုမိုမြန်ဆန်ယခင်ကထက်ဘာသာစကားတစ်ခုကိုသင်ယူကြသည်။ ယနေ့ဘာသာစကားသင်ယူခြင်း Start!
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ CERN တွင်နျူကလီးယားရူပဗေဒပညာရှင်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေစဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏တည်ထောင်သူ, ကျွန်မ, Lingvist စတင်ခဲ့သည်။ သူဟာနှစ်ပေါင်းတိုင်းပြည်ပြင်သစ်စကားပြောပိုငျးတှငျနထေိုငျနှင့်သူ၏လူမှုရေးဘဝကိုချဲ့ထွင်လိုခဲ့ပေမယ့်သူကအမြဲကသူ့အကြိုက်များအတွက်အနည်းငယ် unengaging နှင့်လည်းနှေးကွေးသမားရိုးကျနည်းလမ်းများရှာတွေ့င်။ သူဟာပြင်သစ်သင်ယူဖို့ပိုကောင်းတဲ့လမ်းလိုအပ် - ဒါကြောင့်သူကရှေ့ပြေးပုံစံကိုဖန်တီး, ပြင်သစ်သင်ယူခြင်းစတင်ခဲ့ပြီး high-ကျောင်းကိုဘာသာစကားစာမေးပွဲဖြေဆို ယူ. , အားကြီးသောတန်းနှင့်အတူသှားကွ၏။
ယနေ့ Lingvist ကြောင့်မူရင်းစိတ်ကူးနှင့်၎င်း၏အခြေခံအခြေခံမူ၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည် - ကျနော်တို့ ထိုအချိန်မှစ. ရှည်လျားသောလမ်းလာပါတယ်။ အက်စ်တိုးနီးယားခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ငါတို့ယခုတဲလင်းမြို့, လန်ဒန်, ဘာလင်နှင့်တိုကျိုမြို့ရှိရုံးခန်းများအနှံ့သန်း 1 ကျော်အသုံးပြုသူများနှင့် super-ပါရမီနှင့်ဖော်ရွေအသင်းရှိသည်။
- တွစ်တာ => https://twitter.com/lingvist
- အလယ်အလတ် => https://medium.com/@lingvist
- LinkedIn တို့ => linkedin.com/company-beta/3075775/
- Instagram ကို => instagram.com/thelingvist/
- Facebook ကို => facebook.com/theLingvist
တက်ကြွသင်ယူသူကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းအထဲက Check ဤနေရာတွင် => forum.lingvist.com
အပြည့်အဝစာကြောင်းများနှင့်အတူ * တိုးတက်လာသောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစာရင်းအမြင်
အဆိုပါဝေါဟာရ Builder ထံမှ Lingvist စာကြောင်းများဝေမျှဖို့ * Added နိုင်စွမ်း
Lingvist: ဘာသာစကားတစ်ခုကိုသင်ယူ - အစာရှောင်ခြင်း
12.95 ကို MB
Lingvist Technologies က OU